Isayina Indoda YeVirgo Ekuthandayo: Kusuka Ezenzweni Kuya Ngendlela Akubhala Ngayo - Ukuhambisana
Main Ukuhambisana Isayina Indoda YeVirgo Ekuthandayo: Kusuka Ezenzweni Kuya Ngendlela Akubhala Ngayo
Isayina Indoda YeVirgo Ekuthandayo: Kusuka Ezenzweni Kuya Ngendlela Akubhala Ngayo
Indoda yaseVirgo izokuthanda ngendlela engcono kakhulu, ngendlela ezolile nokubekezela, ngesimo sothando, nothando nesisa esingalingiswa nguye kuphela. Kepha ngeke wazi ukuthi ukuwela kuwe, okungenani isikhashana.
Izimpawu eziphezulu eziyi-10 zokuthi iVirgo ikuwe
Ubuza imibuzo eminingi ukukuqonda kangcono.
Ukhona ngawe lapho uyidinga kakhulu.
Akachithi isikhathi nabamnandi.
Ufisa ukukunika yonke injabulo emhlabeni.
Uyakuhlola ukuze ubone ukuthi uthembekile yini.
Ukhombisa uhlangothi lwakhe olusengozini.
Uzosebenzisa ukudlala ngothando okuyisisekelo, akukho okunye.
Ugcina ukubheka iso kulokho okuzwayo njengobudala.
Uyazijabulisa phambi kwakho.
Unesitayela sokudlala ngothando esigcizelelayo nesithandekayo (bona isitayela sokudlala ngothando seVirgo).
Ngoba ufuna ukuba nobudlelwano obuzinzile futhi obuvikelekile, kungenzeka ukuthi angazinqobi ngothando, futhi futhi ngeke aphenduke ngokuzenzekelayo futhi angalindelekile.
Ufuna ukwazi kahle ukuthi wenzani, futhi uchitha isikhathi nobani, ngoba yilokho ekugcineni okubalulekile.
Hhayi ukwanga okwedlula, hhayi ukubamba ngesandla, futhi ngokuqinisekile akuzona izithembiso ezingezona zokuphila ndawonye. Udinga ukuqiniseka ukuthi akangeni esimweni se-labyrinthine lapho engeke akwazi ukuphunyuka khona engalimele.
Ungathola kanjani ukuthi i-Virgo yakho iyakuthanda yini
Akuyona yonke into ephelele, futhi ukungapheleli kwalo mfana kuhlobene nokuthi usebenzelana kanjani nezintshisekelo zakhe zothando, noma okungenani iningi labo.
Ngoba akanandaba nokuzidela okuzenzekelayo nokwesikhashana, wenqaba ngokusobala iningi labesifazane abeza kuye befuna ubumnandi nobumnandi.
Esikhundleni salokho, lapho ehlangana nomuntu okufanelekile, uqala ukudlala ngothando, okuyinto angajwayele ukuyenza.
Ngokwethembeka nangokusebenzayo, ngeke achithe isikhathi ngento angayifisi nakancane, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi lapho ekhuluma nawe futhi emamatheka ngobuhlanya, kukhona okuqala ukuqhakaza ekujuleni kwenhliziyo yakhe.
Ngeke achithe isikhashana ndawonye nawe, futhi uzofuna ukukwazi ngomqondo ojulile wegama, kusuka ezinzwaneni zakho kuya ezinweleni zokugcina emzimbeni wakho, ngokomzimba.
Indoda yaseVirgo izoziphatha njenganoma yini enye lapho isothandweni, noma okungenani ayimile kahle uma kukhulunywa ngokuqomisa intshisekelo yabo yothando. Uzosebenzisa ukujaha okujwayelekile, achithe isikhathi nomunye umuntu, futhi abazise ngothando lwabo njalo.
Uma lokho kungejwayelekile, futhi kuhle, khona-ke asazi ukuthi yini. Futhi, xwayiswa ukuthi uzozama ukukuthusa ngokubi kakhulu kuye, ukuze abone ukuthi uzoba khona lapho eyidinga kakhulu.
Uma ubungahamba lapho isimo besisibi kakhulu, khona-ke lokho kungamlimaza kakhulu, futhi kusobala ukuthi lokho akufiseleki.
Uzozwa sengathi itshe lisuswa esifubeni sakhe lapho enawe, ngakho-ke kuzoba sobala impela ukuthi uzizwa emuhle ebukhoneni bakho.
Noma ngabe intshisekelo yokuqala, noma umuzwa ojulile wothando, kuhle noma kunjalo, ngoba lokho kuyinto ebaluleke ngempela, ukwazi ukuthi ukuwe noma cha.
Sonke siyazi ukuthi akuwona umuzwa omnandi kakhulu emhlabeni, ukuzidida ngokungaqiniseki, okungukuthi, ngakho-ke ukuthola ngezimpawu ezikhombisa ukuthi uthando lwakho luyathandana, leyo yinto okufanele uyinake futhi naye uyayenza.
Ama-Virgos aziwa ngokulangazelela impumelelo ngaphezu kwakho konke okunye, futhi uma kubhekwa ukuthi ayizimpawu zomhlaba, ezifuna ukuzinza, ukuphepha kwezinto ezibonakalayo, impilo engenazinkathazo, lokho kulindeleke kakhulu kubo.
Manje, okumangazayo futhi okushaqisayo ngempela, okuvela kubantu abanjalo, ukuthi basazokhetha ukuchitha isikhathi nawe, isikhathi ababengasisebenzisa ukuqhubekisela phambili izinhlelo zabo zobungcweti.
Uma lokho kwenzeka, ungaqiniseka ukuthi bakuthanda kakhulu, futhi mhlawumbe bakucabangile ukuthi uzoba yingxenye ebalulekile yempilo yabo kungekudala.
Zisuka nje lapho uya khona, le ndoda yakwaVirgo ayisoze yakuyekela ukubaleka ngaphandle kokukufaka imibuzo ebucayi kakhulu.
Lungiselela izikhathi zokuthumela imiyalezo ezithakazelisa kakhulu futhi ezinwetshiwe empilweni yakho yonke. Uzofuna ukwazi konke ngawe, kufaka nemininingwane yabo bonke ubudlelwano bakho bangaphambilini, ukuze nje abone ukuthi ngabe ubunephutha noma cha.
Bafuna ukuphelela, ngakho-ke lokho akumangazi neze, futhi akufanele ukwesabe lokho, ngoba uma efinyelele kulesi sigaba, kungenxa yokuthi ucabanga ukuthi ufanelekile.
Kuzolunga, inqobo nje uma ungaqambi amanga kumuntu waseVirgo. Futhi, laba bantu bomdabu bazokhuluma ngokuqhubekayo ngezinto ezijule kakhulu, ngoba bahlakaniphe ngendlela eyisimanga.
Indlela yendoda yaseVirgo iyaqabula impela, iyaqamba, futhi ihlukile, uma uzocabanga ukuthi ngeke uthole omunye umuntu onemvelo futhi ophanayo njengaye. Ngokuyisisekelo, ufuna ukuthola kahle ukuthi yini ekwenza uthikhe, emazingeni ayinkimbinkimbi kakhulu, nesizathu salokho?
Ngoba bafuna ukukusiza ukuthi uzithuthukise, kusuka kuyo yonke imibono, futhi lokho akuyona into abaningi abangayenza, noma bazi ukuthi benze kanjani kwasekuqaleni. Okudlula lokho, abalona uhlobo lwendabuko, ngakho-ke bayoba nemibono emikhulu kakhulu futhi evuleke kakhulu yokuhlola.
Lindela eminye imibhalo yendawo, njengezindlela zokuphonsela inselelo futhi uthole ukusabela kwakho kwangaphakathi.
Akufani nokuthi abesilisa baseVirgo abanantshisekelo yokuba nobudlelwano nomuntu abamthandayo, kepha kunalokho ukuthi bathatha isikhathi eside ukukwazi, ngaphambi kokuya kwelinye ibanga.
Kuzodingeka ukuthi wenze leso sinyathelo sokuqala ubacele, noma okungenani ukhombise intshisekelo yakho.
Uma kungebona abasemigqeni engaphambili, bazozizwa belondeke kakhudlwana futhi bathole isibindi esithe xaxa, ngakho-ke mhlawumbe bazovuma khona lapho, uma kunjalo. Kunoma ikuphi, uzokwazi ngokushesha uma bephindisela imizwa yakho, ngoba bazokukhombisa lokho kuzo zonke izinyathelo zendlela.
Ngoba ufisa ukuchitha impilo yakhe yonke ndawonye, ​​uzovame ukukutshela izinto ozenzayo ezingalungile, ukuze nje akusize ube ngcono futhi ube ngcono, umuntu ophakeme kunalowo owake waba yikho.
Ngempela kuwuphawu lothando lwakhe olujulile nolunzulu, ngaphezu kwesakhiwo esiphakeme, futhi ngenxa yokuthi ziguquguquka kalula kunophawu oluvamile loMhlaba, ngeke kube nzima ukumkholisa ukuthi alahle lo mkhuba wakhe.
Uma ufakazela le ndoda yakwaVirgo ukuthi usuvele uyazazi, unesibopho, uvuthiwe, futhi uyabekezela ngokwanele ukuze ubone amaphutha akho futhi uwaqondise, laba bantu bomdabu cishe bazokuthatha ngezwi lakho bese beya eceleni.
Akulona iphutha ukusho ukuthi bazofuna ukukubamba ngaso sonke isikhathi, futhi uma ucabanga ukuthi bayaphumelela ekuhlaziyweni nasekuqapheleni, bayazi ukuthi benzeni ukuze uzwe injabulo yangempela.
Ukukhuluma ngokwengqondo, lo mdabu uzothakaselwa yilokho ongakufeza uma unikezwe isihloko esanele. Uma ukwazi ukumfaka uzungu, ngakho-ke ngokuyisisekelo, uphumelele ukumenza owakho unomphela.
Indoda yaseVirgo iyakwazi ukukuthanda, futhi lokhu ikwenza ngendlela yayo, ehlukile, ngokuba lapho lapho uyidinga khona kakhulu, ngokuveza uthando lwayo ngezindlela ezintsha nezilula.
Ungayenga Kanjani Indoda Eyi-Virgo Kusuka Ku-A Kuya Ku-Z
Ungayiheha Kanjani Indoda Ye-Virgo: Amathiphu Aphezulu Okumenza Athandane
Isitayela Sokudlala Ngothando seVirgo: Empathic futhi Charming
yini uphawu feb 19
Ukuhambisana kweVirgo Nezimpawu Zelanga
Ukuhambisana kweVirgo Soulmate: Ubani Ozakwethu Isikhathi Sokuphila?
Ukujola Nomuntu We-Virgo: Ingabe Unakho Okudingayo?
Izici Zendoda YeVirgo Othandweni: Kusuka Kokuhle Kuya Kusebenze Ngokumangazayo
Owesifazane Wenkawu: Izici Eziyinhloko Zobuntu kanye nokuziphatha
yini capricorn umuntu uthanda embhedeni
uphawu lwezinkanyezi lango-ephreli 1
ungayithanda kanjani i-libra man
yini uphawu ngoJanuwari 18
ukuhambisana kowesifazane kanye nowesilisa namuhla